‘व्यापारीहरुको मन जितेको छु’ « Loktantrapost
‘व्यापारीहरुको मन जितेको छु’
पुस २८ गते हुने मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपाको लोकतान्त्रिक प्यानलको नेतृत्व गर्दै धुलावारीका पुनित बंशल अध्यक्ष पदको उम्मेद्वार बन्नु भएको छ । उहाँसँग लोकतन्त्र पोस्टका मोहन काजी र प्रकाश पौडेलले लिएको चुनावी अन्तरवार्ता प्रस्तुत छ–
अध्यक्षको टिकट पाउन कत्तिको गाह्रो भयो ? दावेदार त अरु पनि थिए ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि दाबेदार धेरै थियौं । लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले दाबेदार धेरै हुनु स्वाभाविक हो । टिकट मैले सहजै पाएँ । अन्य दाबेदार साथीहरुलाई पनि अन्य पदमा समायोजन गरी यो सशक्त प्यानल खडा गरिएको हो ।
नेपाली काङ्ग्रेससँग वैचारिक निकटता राख्ने तपाईको नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक प्यानललाई नै जिताउनु पर्ने किन ?
¬नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपा समेत मिलेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको छ । यो प्यानललाई अत्याधिक बहुमतले विजय गराउनु हुन सम्पूर्ण व्यवसायी कामदारहरुलाई अनुरोध गर्दछु । मेचीनगरलाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिला सुदूरपूर्वी नाकाको रुपमा मात्र रहेको थियो भने अहिले बृहत भएको छ । नेपालकै महत्वपूर्ण नाकाको रुपमा यो नाकालाई अहिले हेर्ने गरिएको छ । यसको सम्भाव्यताहरु धेरै छन् । बङ्गलादेश, भूटान, भारतसँगको व्यापार त छँदैछ । बर्मालाई पनि सडक बाटोबाटै जोड्ने प्रयास भइरहेको छ ।
ओलाङचुङ गोला नाकाबाट चाइनासम्म जोड्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । यो सबै विषयमा सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गर्ने काम हाम्रो नेतृत्वले गर्नेछ । मेचीनगरलाई निकट भविष्यमै ठूलो व्यापारिक हबको रुपमा स्थापित गर्नका लागि हाम्रो नेतृत्वले भूमिका खेल्ने छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने व्यापारी तथा उद्योगपतिहरुसँग समय व्यस्त नै रहन्छ । आफ्नो आवश्यक कामका लागि सँधै समय व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । मैले विगतमा झापा बाणिज्य सङ्घ धुलाबारीलाई पाँच बर्षसम्म नेतृत्व गरें । यसपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरुसँग स्थानीयदेखि केन्द्रीय लेबलसम्म नेतृत्व गरिसकेको छु । त्यो अवस्थामा समयको व्यवस्थापनलाई मैले मजबुत बनाएको छु । उद्योगी व्यापारीहरुको काममा मेरो समय सँधै रहिरहनेछ ।
धुलाबारी बजार पहिला विश्वकै अग्रिम बजारको रुपमा परिचित थियो । छिमेकी मुलुक लगायत अन्य स्थानबाट पनि पर्यटक तथा सेलिब्रेटीहरु आउने गर्दथे । यो बजार पहिलाको अवस्थामा फर्काउन हामी लागिपरेका छौं । यहाँ केही भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ । धुलाबारीबाट बर्ने जोड्ने सडक बन्दैछ । धुलाबारी आसपासमा पाँच तारे होटलहरु बन्दैछन् । सार्वजनिक शौचालायको निर्माण गरिनेछ । पार्किङको उचित प्रवर्धन गरिनेछ । धुलाबारीको मुख्य बजारलाई यातायात मुक्त क्षेत्र बनाएर सिमेन्टेड सडक र प्लान्टेसनको व्यवस्था गरी विशेष रुपमा कस्टुमरलाई आकर्षण गर्ने खालका योजनाहरु बनाउनेछौं ।
स्थानीय तह लगायत सम्बन्धित निकायहरुसँग सहकार्य गरी धुलाबारीलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काउने प्रयत्न गर्नेछौं ।
मेचीनगर अत्यन्त ठूलो छ । काँकरभिट्टाका व्यापारीहरुको समस्या अर्के किसिमको हुन सक्छ भने चारआलीको व्यापारीहरुको समस्या अर्कै किसिमको हुन सक्छ । बाहुनडाँगीको समस्या अर्कै किसिमको हुन सक्छ । यो समस्या म कार्यकारीणी सदस्य हुँदा पनि पहल गर्ने कोसिस गरेको छु । यी सबै बजारहरुलाई व्यवस्थित तथा संरक्षित गर्ने ज्यामिरगढी र दुहागढी औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास हुँदै गएको छ भने बाहुनडाँगी कृषि क्षेत्रमा अगाडि छ । यी सबै सम्भावित क्षेत्रहरुलाई विशेषताका आधारमा हामी त्यसको प्रवर्धनको निम्ति पहल गर्नेछौं ।
हामीले विशेष योजनाहरु ल्याएका छौं । हाम्रो प्रतिवद्धताहरु घोषणा पत्र मार्फत पनि जाहेर गरेका छौं । मुख्य कुरा बङ्गलादेशसँगको व्यापार रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ । जसबाट रोजगारी बढ्नेछ । देशकै अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्नेछ । धुलाबारी, चारआली, बाहुनडाँगी, काँकरभिट्टालगायत अन्य क्षेत्रमा टुटेफुटेका सडकहरुलाई स्तरीकरणका लागि पहल गरिनेछ । उचित पार्किङको व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ । आम्दा अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ ।
मेचीनगरका प्रत्येक चोकचोकमा सीसी क्यामेरा जडानका लागि पहल गरिनेछ । सुरक्षा मजबुद बनाउनलाई पहल गरिनेछ । व्यापारीको हक हितका लागि पूर्ण रुपमा लागि परिनेछ । चारआली र बाहुनडाँगीमा कृषि मण्डीलाई व्यवस्थित गरिने छ ।
म धुलाबारी क्याम्पस पढ्दादेखि नै लोकप्रिय बनेको हुँ । सबैको माया पाएको छु । व्यापारीदेखि लिएर सबैको मन जित्न सफल भएको छु । उहाँहरुको भलोका लागि सधै काम गरिरहेको छु । कर भ्याटसँग सम्बन्धित कुराहरु लगायत व्यापारीसँग सम्बन्धित कुराहरु मैले पहल गरिरहेको छु । विसौं बर्षदेखि व्यापारीको हितको लागि काम गरिरहेको छु । जसकारण आद्योगिक तथा व्यापारीहरुको मनमा विशेष ठाउँ बनाएको छु ।
आम रुपमा मेचीनगरभरि घुमिरहँदा सबै व्यापारी तथा उद्योगपतिहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छु । माया र स्नेहले भोलि चुनावमा पनि सकारात्मक रिजल्ट पाउनेछौं । हामीले अत्याधिक बहुमतले जित्छौं भन्ने महसुस भइरहेको छ । यो जित पुनित बंशलको मात्र नभई यहाँका आम व्यापारी उद्योगपति सबैको हुनेछ ।
देशमा नेकपाको जगजगी छ । तपाई नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा उम्मेद्वार बन्नु भएको हुँदा राजनीतिक समर्थनको हिसाबकिताब कस्तो होला भन्ने सोच्नु भएको छ ?
व्यावसायिक क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसकै प्रभाव देखिन्छ । मुख्य कुरा सरकारको नीतिमा भर पर्छ । नेकपाको अहिलेको नीति व्यापारी तथा उद्योगपतिको हितमा देखिएन । सरकार गठन भएको पछिल्लो अवस्थामा व्यापारीहरुले ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले विभिन्न प्रकारका कर गुणात्मक रुपमा बढाएर व्यापारीलाई मारमा पारिएको छ । धेरै कुरामा व्यापारीलाई छुट दिइनुपर्ने हुन्छ । व्यापारीले कर तिर्ने कर्तव्य हो तर छुट पाउने कुरामा सहजीकरण भइरहेको छैन । भन्सारदेखि स्थानीय करसम्म व्यापारीको हितमा छैन । त्यसकारण पनि व्यापारीहरुले हाम्रो नेतृत्वलाई स्वीकार्नु हुनेछ ।
हाम्रो मतदाता सूची अनुसार १३७६ मत हुनुपर्नेमा केही संशोधन भएर तलमाथि भएको छ । हामी अत्याधिक मत पाउने आशामा छौं । प्रतिद्वन्द्वीको कुरा गर्ने हो भने ऋषिजी पहिला पनि महासचिव भइसक्नु भएको छ । पङ्कजजी अध्यक्ष भइरहँदा ऋषिजी महासचिव बन्दा सहमतिले बनेको एउटा समिति थियो । यो समितिले केही कमी कमजोरी भएको भए नेकपाको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ ।
त्यसकारण हामीलाई नै बहुमत आउने कुरामा विश्वस्त छौं ।
यो उद्योगी व्यापारीहरुको चुनाव हो । यसमा विशेष केही खर्च लाग्दैन । भएमा प्रचार सामग्रीहरुमा केही खर्च लाग्छ । यसमा सामान्य मात्र खर्च हुन्छ । त्यो बाहेक अरु केही खर्च हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।